Fiomanana CEPE – Maro ireo mpianatra nanao « cours » faradoboka - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fiomanana CEPE – Maro ireo mpianatra nanao « cours » faradoboka
Namerimberina ny lesona tsy azo no tena nataon’ireo mpianatra
Kely sisa. Roa andro no niatrika ny fianarana farany mialoha ny hanatontosana ny fanadinam-panjakana Cepe omaly sy androany ireo mpianatra katita kely ao amin’ny taona fahadimy. Samy nanao izay mety hanampiana azy ireo ny sekoly tsirairay. “ Femerenana kely ihany sisa no atao mba tsy hanavesatra be ny sain’ ny ankizy intsony. Amin’ny 10 ora maraina dia mirava”, hoy ohatra Razafindrasoa Madeleine, talen’ny Epp etsy Ankorondrano.
Tahaka izany ihany koa ny tetsy amin’ny Epp Analakely. “ Manala harafesina ny sain’ny ankizy sisa no atao androany (omaly) sy rahampitso (anio)”, hoy ny talen-tsekoly, Ranivoarilala Robine. Niavaka kosa ny tetsy amin’ny Epp Ambanidia. Nanomboka omaly vao niverina nianatra ny ankamaroan’ny mpianatra taorian’ny fanadinana andrana faharoa notontosaina, ny alatsinainy teo.
“ Efa vita tamin’ny fanadinana andrana ny famerenana. Fanitsiana sy fizarana naoty sisa no atao”, hoy Andrianavahy Hanta Chérie. Omaly ihany koa no nizaran’ny ankamaroan’ireo sekoly ny taratasy fiantsoana ho an’ny mpiadina.
Aleo ihany mitandrina. Ho avy indray ny fotoanan’ ny fety, andro hikarakaran’ny olona maro sakafo miavaka amin’ny andavanandro. Fotoana matetika mahabetsaka ny fahapoizinana ara-tsakafo koa anefa izany. “Mitombo hatrany ny olona tratran’ny fahapoizinana ara-tsakafo. Efa nahatratra 650 izany tamin’ity taona ity ary nisy olona roa mihitsy maty vokatr’izany. Ny fotoanan’ ny fety no mahabetsaka ny
Mila mitady vola Ar 600 tapitrisa ny sekoly ambara- tonga voalohany, etsy Ivandry, mba hahafahana manangana manatsara sy manamafy ny sekoly. «Tamin’ny volana janoary 2010 no nirodanan’ity sekoly ity ka efa tonga nandalo teto ny teo anivon’ ny kaominina Antananarivo renivohitra, izay notarihin’ ny Filohan’ny delegasiona manokana mitantana ny renivohitra, Edgard Razafindravahy. Vao tsy ela akory dia nanome toky ihany koa ny teo anivon’ ny Rotary club Ivandry fa
Be mpitia saingy tsy takatry ny fahefa-mividy. Izany no azo hamehezana ny tsenan’ ny voninkazo amin’izao an-katoky ny fetin’ny reny izao. Mikaikaika na ireo mpanjifa na ireo mpivarotra amin’ny halafon’ny entana sy ny tsy fisian’ny tsena. “Tena tsy misy mihitsy ny tsena raha mitaha ny hatramin’izay. Betsaka ny mpitsidika saingy ilay fahefa-mividin’ny olona mihitsy no tsy ampy”, hoy Rakotoson Vololona, lehiben’ny fikambanan’ ny mpamboly voninkazo “Ceinture verte”, mikara-
Hetsika tafiditra amin’ny fankalazana ny faha-20 taonan’ny Esca. Navoaka tamin’ny fomba ofisialy omaly, teny amin’ny CCI Ivato, ireo tanora mpianatra nahavita fiofanana tao amin’ny Sekoly ambony Essca. Mpianatra 457, misalotra ny anarana «Orimbato», no nozaraina diplaoma ambony «Masters» sy «Licence», momba ny Fitantanana sy ny Varotra Iraisam-pirenena ary Marketing . Harilala Ramanantsoa, tanora mpandraharaha, manana
Halatra dabam-pako vy Efa mahatratra folo mahery ny dabam-pako vy, fanangonam-pako eto amin’ny tanànan’ Antananarivo no nisy nangalatra, tao ho ao. Anisan’ny antony mampi- paritaka ny fako amin’ ny toerana sasany. Manao antso ny fiadidiana ny tanàna mba hanaraha-maso ireny dabam-pako ireny fa miteraka fatiantoka be ho an’ny renivohitra. 80 taona ny IHS Feno 80 taona ny Institut d’hygiène social, izay niova ho Etablissement universitaire de soins et de santé public, EUSSP eny Analakely. Nisy fitokanana tsangambato, nenti-nanamarihana izany, ny alakamisy teo. Misy varavarana
CEPE, Fanadinana, Mpanoratra Rijakely, 03.08.2012, 09:35	FIARAHAMONINA